समाचार Archives - Page2of 95 - Ukali Orali
काठमाडौ । नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको कमेडी च्याम्पिएनमा रोल्पाका खड्ग बहादुर पुन (खबपु) मगरले सबैको मन जित्न सफल भएका छन् । वाइल्ड कार्डमार्फत आएका उनले मध्यम वर्गका जनताका आम कुराहरुलाई लिएर कमेडी गर्ने गरेका छन् । लामो समय देखि यस क्षेत्रमा लागेका उनले विगतमा भएको ज नयु द्धको स्वाद पनि चाखेका छन् ।राजनीतिक, सामाजिक… Read More »
कोरोना भाइरस नेपाल भि’त्रिएको आ’शंका ,२ जना टेकु अस्पतालको आ’इसोलेसनमा
काठमाडौं । चीन र दक्षिण कोरियाबाट फर्केका दुई जना नेपाली कोरोना भाइरसको सं‌क्रमण आ’शंकामा अस्पताल भ’र्ना भएका छन् । उनीहरुलाई टेकुस्थित श’हीद शुक्रराज ट्’रपिकल तथा स’रुवा रो’ग अस्पतालको आ’इसोलेसन वा’र्डमा राखिएको छ । भ’र्ना भएका नेपालीमध्ये एक जना चीनबाट र अर्का दक्षिण कोरियाबाट फ’र्केका व्यक्ति भएका प्रवक्ता अनुप बास्तोलाले बताए। ‘दक्षिण कोरियाबाट फ’र्केको व्यक्तिलाई आ’इसोलेसन… Read More »
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई राष्ट्रियसभागृहमा जुत्ताले हा”न्ने युवकको परिचय खुलेको छ । भरतमोहन अधिकारीको स्मृति दिवस कार्यक्रममा भाषण गरिरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि जुत्ता प्र’हार गर्ने युवक तत्कालीन माओवादीकै कार्यकर्ता रतन तिरुवा भएको खुलेको छ। उनी हाल नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग आवद्ध रहेका छन् । तिरुवा जुम्ला निवासी हुन्। जनयु”द्धको… Read More »
घरमा ढकमक्क फूल बनाउने मन छ ? ध्यान दिऊँ यी कुराहरुमा
हामी कोही गाउँमा बस्छौ त कोही शहरमा । जहाँ भए पनि हा मीले आफु बस्ने आसपासको क्षेत्रको सौ न्दर्य बढाउन सक्छौं । फूल रोप्नु वा फूलबारी बनाउनु यसको सरल काइदा हो । यसबाट प्रत्यक्ष हामीलाई फाइदा पनि मिल्छ । एक छिन् सोचौं त, उठ्नसाथ ढकम क्क फूलहरु फुलेको देख्दा कस्तो हुँदो हो ? आफुले धेरै… Read More »